मधेशले अधिकार पाएको दिन हाम्रो लागि सबभन्दा खुशीको दिन हुन्छ – Sahara Times
–कार्यकारिणी सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष)
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महन्थ ठाकुर पक्षले अहिले तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि त्यसको बारेमा स्पष्ट पार्न साउन २२ गतेदेखि महन्थ ठाकुर पक्षका सबै शीर्ष नेताहरु तराई मधेशमा केन्द्रीत हुनुभएको छ । यता, उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिता पाएपछि ३५ जनाको कार्यकारिणी समिति कायम गरी आफू एकजना अध्यक्ष रहने गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो । र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकृति पनि दिइ सकेको छ । यस अवस्थामा पनि महन्थ ठाकुर पक्षले जसपाकै नामबाट तराई मधेशमा कार्यक्रम गरिरहेको छ । यता, भित्रभित्रै नयाँ पार्टी बनाउने प्रकृया पनि सुरु गर्नुभएको छ । यी सब कसरी सम्भव भयो ? प्रस्तुत छ यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रीत रहेर सहारा टाइम्सले जसपा कार्यकारिणी सदस्य अकवाल अहमदसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईहरु अहिले मधेशमा विभिन्न कार्यक्रम लिएर पुग्नु भएको छ, पार्टीमा विवाद चलिरहेको बेला त्यसको अवश्यकता किन पर्यो ?
–पार्टीमा देखिएको विवाद बारे अनेक भ्रमहरु सृजना भएको छ । त्यो भ्रमलाई चिर्नका लागि हामी मधेश झरेका हौं । जसपाका अर्को पक्ष (उपेन्द्र यादव) ले विभिन्न भ्रमहरु छर्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको वास्तविकता के हो, त्यसको बारेमा हामीले मधेशका जनतालाई जानकारी गराई रहेका छौ । पार्टीमा अहिले देखिएको विवादको बारेमा मधेशी जनताले केही भनिरहेको छ । त्यसको बारेमा पनि हामीले जनतासँग बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौ । हामीले यो कार्यक्रम गरिरहँदा जनता निकै उत्साहित भएका छन् । जनताले उपेन्द्र यादवसँग अलग नै बस्दा राम्रो भनि सुझाव दिइरहेको छ । उपेन्द्र यादवले मधेशलाई धोका दिइरहनु भएको छ, जस्ता कुरा जनताबाट नै आइरहेको छ ।
पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाउनु भएको छ, निर्वाचन आयोगले तपाईहरुलाई नयाँ दल दर्ता गराउन पनि भनेको छ तैपनि जसपाकै नामबाट तपाईहरु कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ किन ?
–पार्टीको आधिकारिता उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ, त्यसलाई आफूहरुले मानेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा त्यस सम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन छ । र, अर्को कुरा उपेन्द्र यादवले पार्टीका आधिकारिता माग गर्नुभएको थियो । उहाँले पार्टीमा ठिक ढंगले काम गर्न पाइन भन्दै काम गर्न सहजताका लागि आधिकारिकता माग्नु भएको थियो । त्यो अधिकार उहाँले पाउनु भएको छ । पार्टीकै दावी उहाँले माग गर्नुभएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि आधिकारिता उहाँहरुलाई दिँदा महन्थ ठाकुरहरु जसपामा छैन भनेको छैन । आधिकारिकता उपेन्द्र यादवलाई दिएको छ, त्यसमा चित्त नबुझे अर्को पार्टी दर्ता गराउन सक्छ भनेको छ । त्यही भएर हामी अझै जसपामा नै छौ र जसपामा नै रहने छौं । हामीलाई जसपाबाट कसैले निकालेको पनि छैन । जसपामै भएको कारणले हामी जसपाको ब्यानर युज गरेका हौं ।
उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा कार्यकारिणी समितिको अध्यावधिकका लागि निवेदन दिँदा आयोगले ३५ जनाको कार्यकारिणी समिति सदस्यसहित उपेन्द्र यादव मात्र अध्यक्ष रहेको पार्टी कायम गरेको छ, अनि तपाईहरु कसरी पार्टीमा रहनु भयो त ?
–निवेदन उपेन्द्र यादवले दिनु भएको छ । त्यसको कुनै अर्थ छैन । यसअघि पनि महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरुलाई कारवाही गरी पार्टीबाट निकाल्नु भएको थियो । त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनु भएको थियो । तर त्यो स्वीकृत भएको थिएन । अहिले पनि उहाँले निवेदन दिनुभएको छ । उहाँको काम हो निवेदन दिने, हामीले आफ्नो काम गछौं उहाँले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति कायम गर्नुभएको छ नि यसमा के भन्नुहुन्छ ?
–निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई दिएको आधिकारिताको विषय नै हामीलाई चित्तबुझेको छैन भने यो निर्णयमा झन के हाम्रो चित्त बुझ्छ र । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, निर्वाचनले जे निर्णय गरेपनि यसको विषयमा हामीलाई मतलब छैन । हामी सर्वोच्चमा गएका छौं । सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ त्यसको पर्खाइमा हामी छौ । पार्टीबाट हटाउने अधिकार उपेन्द्र यादवलाई छैन । महन्थ ठाकुर वरियताक्रमको एक नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीमा कसलाई हटाउने कसलाई राख्ने अधिकार महन्थ ठाकुरलाई मात्र छ । उपेन्द्र यादवले हटाउने राख्ने काम अवैधानिक हो । यसलाई हामीले मान्दैनौ, कसैले मान्दैन ।
साउन २२ गतेदेखि मधेशका विभिन्न जिल्लामा जानु भएको छ, तपाईहरुको कार्यक्रम हेर्दा, अपिल पढ्दा त कार्यक्रम पुरै उपेन्द्र यादवको आलोचनामा केन्द्रीत रहेको छ नि, तपाईहरुले आफ्नो कुरा राख्ने हो कि अर्काको आलोचना गर्ने हो ?
–हेर्नुस्, जसपामा उपेन्द्र यादवले ठूलो बदमासी गर्नुभएको छ । आज जसपामा जे भएको छ उहाँकै कारणले भएको हो । उहाँको समाजवादी पार्टी विभाजन हुन लाग्दा हामीले जोगाई दिएका हौ । पार्टी विभाजन हुन लाग्दा रातारात उहाँले पार्टी एकीकरण गर्न तयार हुनुभयो । सादा कागजमा हस्ताक्षर गरेर दिन तयार हुनुभयो । अहिले उहाँले नै ठूला ठूला कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँको व्यक्तिगत दुश्मनी केपी शर्मा ओलीसँग छ वा होला । तर त्यसको बदला पुरै मधेशसँग लिनु भएन नि । ओलीले उहाँलाई सरकारबाट बेज्जती गरेर निकाल्नु भएको सजाय पुरै मधेशलाई दिन मिल्छ ? ओलीसँग व्यक्तिगत दुश्मनी छ भने उहाँले व्यक्तिगत रुपमा त्यसलाई सल्टाउनुपर्छ । केपी शर्मा अ‍ोलीले मधेशका माग पुरा गर्न तयार हुनुभएको थियो । गर्न पनि थाल्नु भएको थियो, केही माग पुरा पनि गर्नुभयो । अझै पुरा हुने प्रकृयामै थियो । तर उपेन्द्र यादवलाई त्यो कुरा पचेको थिएन । उहाँ अ‍ोलीको सरकारमा दुई बुँदे सम्झौता गरेर जानु भएको थियो । १८ महिनाभन्दा बढी सरकारमा बस्नुभयो तर मधेशका एउटा पनि माग पुरा गराउन सक्नु भएन तर हामी सरकारमै नगइकन पनि मागहरु पुरा गरायौं । त्यो कुराको रीस उपेन्द्र यादवलाई रहेको छ । ‘म यत्रो दिन सरकारमा रहँदा केही गराउन सकिनन् तर उहाँहरु सरकारमै नगइकन मागहरु पुरा गराई रहनु भएको छ, भनि लागेर उपेन्द्र यादवले त्यसलाई डिस्टर्व गर्नुभयो । त्यति मात्र होइन, महन्थ ठाकुर पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ तर उहाँलाई पार्टीको कुनै जानकारी नदिइकन बैठकहरु बसाउनु भयो, निर्णयहरु गराउनुभयो । अर्थात उहाँले पार्टीलाई निरकुंश र अराजक शैलीले चलाउन थाल्नुभयो । त्यसको हामीले विरोध गरियौं । पार्टीमा कुनै पनि निर्णय गर्दा वा बैठक बोलाउँदा कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार हुन्छ उहाँको समन्वय र सल्लाहमा हुनुपर्छ तर उहाँले केही नसोधीकन जवर्जस्ती एकलौटी ढंगबाट निर्णयहरु गर्न थाल्नुभयो । जथाभावी कारवाहीहरु गर्न थाल्नुभयो । केन्द्रमा जथाभावी कारवाहीहरु गर्नु नै भयो उता प्रदेश २ मा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई हटाएर काँग्रेस र माओवादीलाई ल्याउनुभयो । लुम्बनी प्रदेशमा पनि त्यहाँका सांसदहरुलाई कारवाही गर्नुभयो । उहाँ पार्टीमा अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो ।
केपी शर्मा अ‍ोलीले पुस ५ मा संसद विघटन गर्दा महन्थ ठाकुरलगायतका सबै नेताहरु आन्दोलनै गर्नुभएको थियो तर पछिल्लो पटक संसद विघटन गर्दा त्यसमा सघाउनु भयो किन, के त्यो बेला प्रतिगमन थियो र पछि त्यो सच्चिएको थियो ?
–हो, पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा संविधान विपरित गर्नुभएको थियो तर पछिल्लो पटक विघटन गर्दा संविधानअनुसार प्रकृया पुर्याएर गर्नुभएको थियो । तर संसद विघटन गर्नुस् भनि हाम्रो सल्लाहमा भएको होइन । हामीले संसद विघटन गर्नका लागि सल्लाह दिएका थिएनौ र हामीसँग कुनै सल्लाह पनि गर्नुभएको थिएन ।
जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि तपाईहरु नयाँ पार्टी गठन गर्न लाग्नु भएको कुरा बाहिर आएको छ के सही हो ?
–होइन, हामीले अहिले कुनै पार्टी गठन गरिरहेका छैनौ । मैले अघि नै भने कि हामी जसपामै छौं । जसपामा रहेर नै हामी काम गर्छौ । पार्टी गठन गर्ने अहिले हाम्रो कुनै सोच बनेको छैन । मिडियामा आएको कुरामा कुनै सत्यता छैन । हामी जसपामा नै छौं ।
जसपाकै अन्य युवा नेताहरुको नामबाट पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ अनि भन्नुहुन्छ पार्टी दर्ता भएको छैन किन ?
–निर्वाचन आयोगमा गएर कसले के निवेदन दिए, किन दिए त्यो मेरो जानकारीमा छैन । मलाई जहाँसम्म थाह छ कि जसपाका कुनै पनि नेता आधिकारिक रुपमा अर्को नयाँ पार्टी बनाउने तिर जानु भएको छैन । अरु कसैले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको होला त्यो पार्टीको आधिकारिक होइन । अदालतको निर्णय नआएसम्म हामी अन्य विषयमा केही गर्दैनौ ।
संसद पद जाने डरले अहिले पार्टी दर्ता गराउने तिर खुलेर नजानु भएको हो भनिन्छ नि के हो ?
–कसरी संसद पद जान्छ ? संसद पद जानेगरि नयाँ पार्टी गठन गर्ने भएपछि मात्र जान्छ तर हामीले जसपामै छौं भने कसरी पद जान्छ । अर्को कुरा हामी मधेशका लागि लड्छौं । हाम्रो लागि पद कुनै ठूलो होइन । महन्थ ठाकुरले भन्नुभएको छ, मरे तो मुक्ति, जिये तो मेधश’ । उहाँले यो कुरा त्यतिकै भन्नुभएको होइन । उहाँका लागि मधेशको अधिकार र पहिचानबाहेक अरु केही छैन । उहाँ पदको लागि राजनीतिक गर्नुभएको छैन । मधेशका लागि उहाँ मर्न तयार भएको व्यक्ति हुनुुहुन्छ । काँग्रेसमा हुँदा उहाँलाई पदको कुनै कमी थिएन, मान मार्यादाको कमी थिएन तर उहाँ मधेशको अधिकारका लागि सबै त्यागेर आउनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँका लागि संसद पद कुनै ठूलो पद होइन । उहाँ मधेशको अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले उहाँलाई पदको धम्की कसैले नदिए हुन्छ ।
अहिले जसपामा महन्थ ठाकुरलगायत तपाईहरु साधारण सदस्य मात्र हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यसरी साधारण सदस्य भएर कति दिन बस्नु हुन्छ ?
–कम से कम साधारण सदस्य छौं नि । साधारण सदस्य भएर पनि हामी जसपामा नै रहेर काम गर्छौ । त्यही भएर अघि मैले भने नि कि हाम्रो लागि पद ठूलो होइन, मधेशको मुद्दा ठूलो हो । मधेशले अधिकार पाउँछ त्यो नै हाम्रो लागि ठूलो पद हो । संविधान संशोधनलगायत मधेशले सम्पूर्ण अधिकार जुन दिन पाउँछ त्यो दिन हाम्रो लागि सबभन्दा ठूलो खुशीको दिन हुनेछ । र, हामी पदमा नरहेर पनि मधेशका लागि संघर्ष गर्छौ ।
पद चाहिँदैन भन्नुहुन्छ, अनि सुटुक्क शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा किन विश्वासको मत दिनुभयो, सत्ताविना तपाई बस्न सक्नु हुन्न जस्तो सन्देश गएन त ?
–हामीले शेरबहादुर देउवालाई त्यतिकै विश्वासको मत दिएका होइनौं । हामीले वार्ता र छलफल गरेका छौं । प्रधानमन्त्री देउवाले मधेशको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । त्यही भएर हामीले समर्थन गरेका हौँ । समर्थन जनाउँदैमा सत्ता लोभी भए भन्न मिल्दैन । हामी सरकारमा गएका छैनौ । हामीले भनियौं कि मधेशको माग पुरा गर्ने हो भने मात्र विश्वासको मत दिन्छौं उहाँ तयार हुनुभयो । र अर्को कुरा हामीले त्यतिकै विश्वासको मत दिएका होइनौं, प्रधानमन्त्री देउवाले हामीलाई पत्र पठाएर विश्वासको मतमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
अ‍ोलीको सरकारमा पनि यही भनेर जानु भएको थियो, यही भनेर विश्वास गर्नुभएको थियो आखिर नगद होइन सबै उधारो भयो अनि अहिले देउवामाथि कसरी विश्वास गर्नुभयो त ?
–अ‍ोलीले कुनै माग पुरा गरेको छैन भने होइन । १४९ जनाको मुद्दा फिर्ता गर्नुभएको छ । नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश पनि ल्याउनुभयो । सर्वोच्चले त्यसलाई मान्यता दिएन त्यो बेग्लै कुरा हो तर अ‍ोलीले अध्यादेश ल्याएर भएपनि सम्बोधन गर्ने प्रयास त नगर्नुभयो नि । संविधान संशोधनका विषयमा छलफलका गर्न एउटा कार्यदल पनि ओलीले बनाउनुभएको थियो । रेशम चौधरीलाई रिहाय गर्न कानुन प्रकृया पनि सुरु गर्नुभएको थियो । यी सबै हाम्रो प्रयासबाट भएको हो । अब हामी चाहन्छौ कि ओलीले जति काम गर्नुभयो, अब जहाँबाट काम नगर्न बाँकी छ अर्थात ओलीले गर्न बाँकी रहेको काम देउवाले गर्नुपर्छ ।